काठमाडौकै यी युवतीहरुले केटा नपाएको भन्दै गरे सामूहिक विज्ञापन (सम्पर्क नम्बरसहित) - samayapost.com
काठमाडौकै यी युवतीहरुले केटा नपाएको भन्दै गरे सामूहिक विज्ञापन (सम्पर्क नम्बरसहित)
समयपोष्ट २०७६ पुष २७ गते ८:०८
पछिल्ला दिनहरुमा जीवनभर साथ दिने व्यक्ति खोज्न पनि विज्ञापन गर्नुपर्ने भएको छ । मान्छेहरु यति व्यस्त भए कि बच्चालाई होस्टल, बा–आमालाई बृद्धाश्रम राखेर आफु काममा व्यस्त भइरहेका छन् ।
उनीहरुले सन्तानलाई पनि यति व्यस्त बनाए नि उस्ले आफ्ना लागि जीवनसाथिसम्म खोज्ने समय पाएन नत उस्का बा–आमालाई नै फुर्सद छ ।
त्यसैले अहिले विवाहका लागि केटाकेटी खोज्ने काम पनि अरुले नै गर्न थालेका छन् । सामान्य भाषामा लमी भनिएका उनीहरुले विवाहलाई एक खालको डिलजस्तो गराएका छन् ।
यसरी केटा खोज्नेमा धेरै विदशे गएका युवा युवतीहरु र काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएका युवा युवतीहरु रहेका छन् । यस्तै हरेक दिन कान्तिपुर पत्रिकामा यस्तो विज्ञापन देख्न पाइन्छ ।
यसका लागि सामाजिक सञ्जालको पनि भरपुर प्रयोग भइरहेको छ । यस्तै आजको विज्ञापनमा नेपाली मुलकी २४ वर्षीय अमेरिकी युवतीलाई केटा चाहियो भन्ने विज्ञापन आएको छ । यसका लागि तपाईले ९८८६३२४१५८ मा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
यस्तै अर्को विज्ञापन काठमाडौंको हो यहाँ काठमाडौं निवासी एक ३२ वर्षीय युवतीलाई केटा चाहिएको छ । पेशाले जागिरे यी युवतीलाई सम्पर्क गर्नका लागि ९८६९४२१९९५ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
अमेरिका बस्ने केटीलाई खान्दानी केटा चाहिएको छ भनिएको छ तर काठमाडौं बस्नेलाई चाही असल भए हुन्छ भनिएको छ ।
दुई जना युवतीलाई केटा आवश्यक परेको विज्ञापनपछि अब केटालाई केटी चाहिएको कुरा पनि हेर्नुहोस् । अष्ट्रलियाको केटालाई उतैको केटी चाहिएको छ । यसका लागि तपाईले ९८४११७६७२४ मा सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
युवतीको मन जित्ने तरिका
आत्मबल दरो बनाएर आफ्ना कुरा राख्न सक्ने, भद्र, आत्मविश्वासी, निडर, मिजासिलो आदि गुण भएका पुरषप्रति युवती चाँडो आकर्षित हुन्छन् ।
घर कस्तो छ भन्ने बुझ्नका लागि पहिले ढोकाबाहिरबाट भित्र छिर्नुपर्छ । भित्र नछिर्दै देखिने भनेको बाहिरी आवरण हो । आवरण मन परेमा भित्र छिरौ–छिरौ लाग्न सक्छ। त्यसैगरी मनभित्र छिर्ने मुख्य ढोका भनेको गेटअप हो । जसले कसैलाई सजिलै आकर्षित गर्न सक्छ । दोस्रो कुरा भनेको उसले गर्ने व्यवहार हो । अरुको भलो चिताउने, सहयोगी भावना भएको, स्वच्छ मन र सफा चरित्र भएको हुनुपर्छ ।
मानिस कस्तो भन्ने उसको चरित्रले दर्शाउने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा छैन । कत्तिको इमान्दार छ, घरपरिवार प्रति कति जिम्मेवार छ, समझदार छ कि छैन रु आदि कुरामा युवतीहरु धेरै केयरफुल हुन्छन ।
अर्को पर्सनालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । कन्फीडेन्टका साथ् आफ्ना कुरा राख्न सक्ने, भाद्र, आत्मविश्वासी, निडर, मिजासिलो आदि गुण भएका पुरुषपर्ती युवती चाँडो आकर्षित हुन्छन ।
अनुहार राम्रो मात्र हुँदैन । उसमा कुनै ट्यालेन्ट हुनुपर्छ । सबैमा कुनै न कुनै खुवी हुन्छ । कोहि गित गाउन सिपालु होला, कोहि लेख्न सिपालु होला, कोही खेलकुदमा, कोही पढाइमा, कोही चित्रकलामा त कोही कुनै विधामा यस्ता प्रतिभाका कारण पनि कुनै युवती तपाइँप्रति आकर्षित हुन सक्छे ।
इमान्दार पुरुष युवतीलाई मन पर्छ । प्रेम सम्बन्ध गासिनुपुर्व तपाई कसैको साथि मात्र हुनुहुन्छ भने उसले तपाइको इमान्दारिता जाँचेको हुन् सक्छ ्र कत्तिको इमान्दार छ, घरपरिवारप्रति कति जिम्मेवार छ, समझदार छ कि छैन रु आदि कुरामा युवती धेरै केयरफुल हुन्छन ।
सकेजति खुल्न सक्नुपर्छ । अन्तरमुखी स्वभावका पुरुष शंकास्पद देखिन्छन । आफ्नो सबै विवरण दिन, सुख दुखका कुरा साटा–साट गर्ने , इच्छा, चाहाना र रोजाइबारे जानकारी लिने र दिने गर्नुपर्छ । यस्तो अग्रसरताले आकर्षण बढ्छ ।
सानातिना समस्या आफै समाधान गर्न सक्ने हुनुपर्छ । कुन समयमा कसरी प्रस्तुत हुने र को सँग कस्तो व्यवाहार गर्ने आदिबारे ख्याल हुनुपर्छ । कसैको ‘कम्पनि’ मा बस्न रुचाउने, खुल्ने छिटै घुलमिल हुने, अरुलाई हसाउन सक्ने हुनुपर्छ ।
बौद्धिकता पनि चाहिन्छ । हेरेर समस्याको समाधान गर्न सक्ने, कडा परिस्थिततिको ‘ट्याकल’ गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अरुलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्ने, धेरै कुराको ज्ञान भएको, मेहनेती भए अझ सुनमा सुन्गंध नै हुन्छ । अफ्ठ्यारो स्थिति आयो भने यो सँग जीवन कटाउन सक्छु भन्ने खालको फिलिङ युवतीमा जगाउन सक्नुपर्छ ।
आफ्नै प्रेमिका आमा बनेपछि….
१३ वर्षीय विद्यार्थीसँग शिक्षिकाले यौनसम्बन्ध राखेपछि..
आधुनिक जमानाका आधुनिक निवास्थान ! यस्ता पनि हुन्छन् घर (फोटोफिचर)
किशोरीहरुले किन रोज्छन् विवाहित पुरुष ?
सेक्सका लागि बिहानको समय सबैभन्दा बेष्ट, यस्ता छन् फाइदा
बिरालो बच्चामाथि एक हप्तासम्म सामुहिक बलात्कार, त्यसपछि गयो ज्यान (हेर्नुहोस् भिडियो)